युएई पुगेका सुमनका दुवै मृगौला फेल भएपछि आमाको पुकार–मेरो मृगौला दिन्छु, छोरो बचाइदिनुहोस् :: रामकुमार परियार :: Setopati
युएई, मंसिर ५
भाइटीकाको अघिल्लो दिन मध्यराति अबुधाबिको एनएमसी अस्पतालबाट अबुधाबीमै रहेको सुमनको डेरामा फोन आउँछ। ‘सुमन जी, तपाईँको दुवै मृगौला फेल भएको पाईयो, तुरून्त अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भयो,’ यो खबर टुंगिनसक्दै सुमनको ओठमुख सुक्छ, अनुहारको रंग फिक्का हुन्छ।
दिपावलीको रमझममा घरदेश झुमिरहेको बेला परदेशमा यस्तो खबर सुन्दा कसको पो मन थामिएला? कुन परदेशी भावविह्वल नबन्ला र?
यस्तै बज्र आईपर्‍यो चितवन, रत्ननगर नगरपालिका टाँढीका २५ वर्षिय सुमन परियारलाई। उनी अढाई वर्षदेखि अबुधाबीको एक कफी सपमा वेटरको रूपमा कार्यरत छन्। परियार परिवारका एक्लो छोरा, विवाह पछि बढेको जिम्मेवारीसँगै सुखद भविष्यको खोजीमा उनी परदेसिएका थिए ।
युएई आएको दुई वर्षसम्म उनमा कुनै स्वास्थ समस्या देखिएन। परिवारसँगको लामो बिछोडपछि दुई महिने घर बिदा मनाउन चैतमा नेपाल गएका परियार गएको जेठमा युएई फर्किएका थिए।
युएई फर्किएको केही महिनामै उनमा खोकी लाग्ने , उल्टि आउने, टाउको दुख्नेजस्ता समस्या देखा परेको थियो ।
यही समस्याले सुमनलाई तिहारको मुखमा च्याप्यो। ग्रस्त भएपछि साथीहरूले उनलाई कात्तिक २२ गते अबुधाबीस्थित एनएमसी अस्पताल लगेर स्वास्थ परीक्षण गराए। सोही रात रक्त परीक्षणको रिपोर्टसँगै अस्पतालबाट आकास्मिक फोन आयो, त्यसपछि तत्कालै साथीहरुले उनलाई अस्पताल लिएर गएका थिए।
अस्पतालले सोहि रात बरूजिल अस्पतालमा रेफर गर्‍यो । त्यहाँ उपचार गर्न खर्चले नधान्ने भएकोले केही दिनपछि साथीहरूले खलिफा अस्पतालमा भर्ना गरे।
अहिले उनी खालिफा अस्पतालको शैया नं २२ मा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन्। अस्पताल भर्ना भएको ८ दिन भयो, यसबीच ६ पटक डायलासिस गरिसकिएको छ। ‘अस्पतालले छिट्टै मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ भनेको छ, धेरै खर्च लाग्छ अरे। कहाँबाट ल्याउनु त्यत्रो पैसा?,’ परियारले रूँदै भने।
भएको एउटै सन्तान विदेशमा बिरामी भएर थला परेको खबर थाहा पाएदेखि सुमनका बाबुआमाको आँखामा आँसु अडिएको छैन।
छोराको जीवन बचाउन आफ्नो एउटा मृगौला दिन तयार आमा चन्दा परियारले मृगौला प्रतिस्थापनमा लाग्ने खर्च जुटाउन देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीलाई सहयोगको अपिल गरेकी छिन्।
सुमन अस्पताल भर्ना भएपछि सँगै काम गर्ने झापाकी भूमिका श्रेष्ठ, सञ्जु गुरूङलगायतले नियमित रेखदेख गरिरहेका छन्।
सुमन कार्यरत मुसाफाको दलमा मलस्थित टिम हर्टसन कफी सपका साईट व्यवस्थापक सञ्जु गुरूङले कम्पनीसँग कुरा गरेर उनको उपचारमा कम्पनीको तर्फबाट सक्दो सहयोग जुटाउने कोसिस गरिरहेको बताए।
विदेशमा यस्ता किसिमका बिरामीको उपचार महङ्गो हुने गर्छ। बिरामी कम्पनीको ईम्प्लोयमेन्ट भिसामा छ र कम्पनीले स्वास्थ बिमा गरिदिएको छ भने उपचार र औषधिको खर्चमा केही राहत मिल्ने गरेको छ।
यद्यपी सम्पूर्ण छुट भने पाईँदैन। यस्तो स्थितिमा कम्पनीले बिरामीलाई स्वदेश फर्काउने गरेको छ। सुमनलाई पनि कम्पनीले यहाँ रहँदा र डायलोसिस गर्दा सम्मको सबै खर्च व्योहर्ने जनाएको छ।
सुमनलाई सहयोग गर्न चाहनेले युएईमा सुमनले काम गर्ने पसलका म्यानेजर सन्जु तमु ०५५७२८२७०६०, तथा चितवनमा सुमनका बाबु शितलबाबु परियारलाई ९८४५-४०६३५४ र आमा चन्दा परियारलाई ९८४५-५२३३१९ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ४, २०७५, २२:२२:००